Taliban oo Sheegtay in 50 Sarkaal ay ku Dishay Weerar Ka Dhacay Magaalada Kaabul – Banaadir weyne
Sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta Telgaramka ee Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan, qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay alaabka laga galo Wasaaradda xilli Shaqaalaha ay ka rawaxayeen shaqooyinkooda, waxaana Camaliyadda koowaad ee Istish-haadiga ah fuliyay walaal lagu magacaabo Xaafid Khaliilu Raxmaan oo kasoo jeeda magaalada Qandahaar.
Weerarkaas kadib waxaa goobta soo gaaray Saraakiil iyo Askar ka tirsan Ciidamada Booliiska oo gurmad ahaa, hase yeeshee halyey kale oo ka tirsanaa Guutada Istish-haadiyiinta ee Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa bartanka ka galay Ciidankii gurmadka ahaa, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed oo ka badan midkii uu geystay qarixii koowaad.
Wararka horudhaca ah ee kasoo baxaya howl-gallada Isitish-haadiga ah ee shalay gelinkii dambe ruxay magaalada Kaabuul waxay sheegayaan in Cadowga uu halkaasi kasoo gaaray khasaaare lixaad leh, iyadoona ay goobta ku dhinteen Saraakiil sar sare oo ka tirsanaa Ciidamada Xukuumadda daba dhilifka ee Kaabuul.
Saraakiisha illaa iyo hadda magacyadooda la helay ee qaraxyadaas ku dhintay waxaa ka mid ah Jeneraal Cabdurazaaq Banjshiiri oo ku magacownaa Taliyaha Ciidamada gaarka ee Wasaaradda difaaca, waxaa sidoo kale ku dhintay Taliyaha aagga labaad ee qaabilsnaa Amniga magaalada Kaabuul iyo ku xigeenkiisa, halka sidoo kale ay ku dhinteen laba Sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada gaarka ee hogaamiyaha Maamulka daba dhilifka ee Afghanistan ninka lagu magacaabo Ashraf Ghani.
Afhayeenka Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid ayaa ka hadlay howl-galladaasi, isagoona sheegay inay bartilmaameedsadeen Saraakiil sar sare oo ka tirsanaa Wasaaradda difaaca ee Xukuumadda Kaabuul.
Howl-galladani waxay imaanayaan xilli mudooyinkii dambe lasoo dhaafay Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ay sii kordhisay howl-gallada ay ka fuliso magaalada Kaabuul, iyadoona todobaadkii hore weerar kan la mid ah lagu qaaday dhismaha Jaamacadda Mareykanka ee magaaladaasi, halkaas oo lagu dilay ku dhawaad labaatan ruux.